Iimviwo zeeTesha zeTesha eziliTheshana: Ukupapashwa komnye nge-12
Ukusebenzisa i-Times ithebula ukufundisa ukuphindaphinda
Amaxesha amathebhu kunye nemveliso yeenomboro ezikwelekile.
Ukufundisa abafundi abatsha ngokuphindaphinda ngokuphindaphindiweyo ngumdlalo wokunyamezela kunye nokwakhiwa kwememori, ngenxa yoko amaxesha amathebula afana nelinye ngakwesobunxele anceda kakhulu ekuncediseni abafundi ekukhunjuleni iimveliso zokuphindaphinda iinombolo ezilishumi elinambini.
Amacwecwe amaxesha afana nalawa aphuhlisa ikhono lokuqala labafundi bebanga lesibini ukukhawuleza ukuphindaphinda ngokulula, ubuchule obuya kubaluleka kwizifundo zabo eziqhubekayo kwimathematika, ngakumbi xa beqala ukuphindaphinda kwamadidi amabini kunye nantathu.
Ukuze kuqinisekiswe ukuba abafundi bafunde ngokufanelekileyo kwaye bazikhumbule amaxesha amathebhile, kubalulekile ukuba ootitshala bawafundise enye ikholomu ngexesha, ukufunda zonke iimeko ezimbini ngaphambi kokunyuka ukuya kwiintathu, njl njl.
Ngaloo ndlela, abafundi bafanele balungele ukuthatha iimvavanyo ezikhankanywe apha ngezantsi, apho abafundi bezifundo ngeziganeko eziphindaphindiweyo zeendidi ezahlukeneyo zeenombolo ezili-12.
I-Order efanelekileyo yeeTesha zeeTesha zeeTables
Uvavanyo lwesampula lokuphindaphinda izinto ukuya ku-12. D. Russell
Ukuze abafundi balungiselele ngokufanelekileyo ukuphindaphinda kweminithi eyi-1 bemibuzo ukuya kwi-12 , ootitshala kufuneka baqinisekise ukuba umfundi uyakwazi ukunqumla isibalo ngo-2, 5 no-10 kunye neqela elilodwa elingaphaya kwe-100 ngokuqala ngamaxesha aphindwe kabili kunye nokuqinisekisa umfundi uhamba kakuhle ngaphambi kokuhamba.
Abaphengululi ekufundiseni iimathematika zakuqala baxabisa lo myalelo olandelayo xa bebonisa abafundi ngamaxesha okuqala okokuqala: Iibini, ii-10s, ii-Fives, iZikwere (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, njl), ezine, iiSixes kunye I-Sevens, kwaye ekugqibeleni iEights kunye neNines.
Ootitshala bangasebenzisa la maxwebhu okuphindaphinda aphuhliswe ngokukodwa kulolu cwangciso olucetyiswa kakhulu, oluhamba nabafundi ngokusebenzisa inkqubo ngokulandelelana kwememori yexesha ngalinye njengoko bafunda ngabanye.
Ngokukhokela abafundi ngokusebenzisa inkqubo yokufunda amaxesha ngamaxesha ngamanye, ootitshala banokuqinisekisa ukuba umfundi ngamnye uyaziqonda ngokucacileyo le ngqiqo ebalulekileyo ngaphambi kokuba aqhubekele kumatima anzima.
Iingxaki zeMemori: Iimviwo zee-1-Minute Iimvavanyo
Uvavanyo 2. D.Russell
Ezi zilandelayo zivavanyo, ngokungafani neempendulo ezikhankanywe ngasentla, zicelomngeni abafundi kwiimemori zabo ezipheleleyo zeetafile ezipheleleyo zizonke ixabiso eliphakathi kwe-12, kungekho myalelo othile. Iimvavanyo ezinjengalezi ziqinisekisa ukuba abafundi bagcina ngokufanelekileyo zonke iimveliso zala manani aphantsi ukwenzela ukuba ekugqibeleni banokuqhubela phambili ekuphindaphindeni kwamanani amabini anesithathu.
Phrinta le mibuzo ye-PDF enokumngeni ukuqonda kwabafundi ngeengqinisiso zokuphindaphinda nge -test minute-1 : I- Quiz 1 , i- Quiz 2 kunye ne- Quiz 3 . Ngokuvumela abafundi ithuba elilodwa ukuba bazalise le mvavanyo, ootitshala bangakwazi ukuvavanya ngokuchanekileyo ukuba imemori yomfundi ngamnye yeetafile ziye zaqhubela phambili.
Ukuba umfundi akakwazi ukuphendula umbuzo wemibuzo, cinga ukuba ukhokele ukuba umfundi ujolise kumntu ngamanqaku amanani kwimiyalelo echazwe ngasentla. Ukuvavanya inkumbulo yomfundi kwitafile nganye ngabanye kunokunceda utitshala ukuba aqonde kakuhle apho umfundi efuna uncedo oluninzi.
Iziganeko ezi-3 ezidumileyo zePoltergeist eziza kukukhupha